ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးကြောင်လေးလို့ သမုတ်ထားတဲ့ အမေရိကန်က ကြောင်ကလေး - TheeSayChin
ပါဒီတာ အမည်ရတဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဟာ ခပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပေပေတေတေ နေတတ်တဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အရင်တုန်းက နော့သ်ကယ်ရိုလိုင်းနားက မစ်ရှဲလ်ကောင်တီ တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ဂေဟာမှာနေရင်း သခင်အသစ်က သူ့ကို ချစ်လို့ အိမ်ခေါ်ပြီး မွေးစားဖို့ လုပ်ပါတယ်။
ပါဒီတာက ဂေဟာမှာနေခဲ့ဖူးပေမယ့် ဂေဟာကနေ အိမ်သစ်ဆီ သွားဖို့လည်းဖြစ်လာရော မာနကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပါ။ ဂေဟာဝန်ထမ်းတွေက သူ့ကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်တာကို လုံးဝအရိုက်မခံပါဘူး။ အတော်ပေတဲ့ ကြောင်မလေးပါပဲ။
အခုဆိုရင် ပါဒီတာက နာမည်အသစ်ရနေပါပြီ။ နိုဝယ်လို့ သူ့သခင်သစ်တွေက နာမည်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိအိမ်မှာ သူ့ဘဝလေးက အေးချမ်းလှပါတယ်။ သူ့မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် အိပ်ခန်းသက်သက် ရှိပါတယ်။ နိုဝယ်ကို အခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကမှ တန်နက်ဆီမှာနေနေတဲ့ ဂျိုးနဲ့ ဘက်တီ လင်မယားနှစ်ယောက်က မွေးစားခွင့်ရသွားတာပါ။ နိုဝယ်က ဆိုးပေမယ့် သူ့ကို မွေးစားချင်တဲ့သူတွေက အများသားပါပဲ။ သူ့ကို မွေးစားဖို့ လူ (၁၇၅) ယောက်က ဖောင်တင်ထားတဲ့အထဲမှာ ဂျိုးနဲ့ဘက်တီလင်မယားက ကံထူးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ နိုဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ နိုဝယ်အရင် နေခဲ့ဖူးတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဂေဟာက သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြထားပါတယ်။ သူ့ကို ဂေဟာဝန်ထမ်းတွေက ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးကြောင်မလေးဆိုပြီး နာမည်တောင် ပေးထားပါတယ်။ ကြောင်မလေးက ဂေဟာက ရုံးခန်းတစ်ခန်းလုံးကို သူပိုင် နေရာလို့ပဲ မှတ်ယူထားပါတယ်။ ကွန်ပြူတာပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သူထိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ခုံကို သူကဝင်ထိုင်ပြီး ဟိုလူက ပြန်လာလို့ သူ့ခုံသူပြန်ဆွဲထိုင်မလို့လုပ်ရင် ကြောင်မလေးက မာန်ဖီပါသေးတယ်။ လူတွေလက်ထဲမှာ ကြောင်ဆေးပင်တွေ့ရင် သူက လိုက်လုပါတယ်။ ကြောင်ဆေးပင်ကို လုပြီး ဆေးပင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်ပြီး သဘောကျနေတတ်ပါသေးတယ်။ သေတ္တာတွေ ဘာတွေပေါ်မှာများထိုင်မိရင် ကြောင်မလေးက လုံးဝဖယ်မပေးတော့ပါဘူး။ ပေကပ်ကပ်နဲ့ ထိုင်နေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီထိအောင် ဆိုးတာပါ။
Perdita World’s Worst Office Manager
Perdita decided to check out the office today. She met our office cats and acted like any famous cat would (ignored them and acted as if they didn’t exist). She “sang” to us all morning and accepted scratches on the head on her terms. We are happy to be her entourage until her adopter is chosen. A decision should be made today….stay tuned and turn your volume up!
Posted by Mitchell County Animal Rescue, Inc-North Carolina on Tuesday, January 28, 2020
နောက်ပြီးတော့ သူမကြိုက်တဲ့အရာတွေကလည်း ခပ်များများပါ။ အရောင်တွေထဲမှာဆိုရင် ပန်းရောင်၊ ကြောက်ပေါက်လေးတွေ၊ ခွေးတွေ၊ ကလေးတွေ၊ ကြက်ပေါက်ကလေးတွေ၊ ဒစ်စနီရုပ်ရှင်တွေ၊ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်တွေကို ကြောင်မလေးက မကြိုက်ပါဘူး။ သူမကို ပွေ့ဖက်တာကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ကြောင်မလေးရဲ့ သခင်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျိုးနဲ့ ဘက်တီတို့ကတော့ ပါဒီတာဆိုတဲ့ နာမည်ကြောင့် ကြောင်မလေးဟာ အမြဲစိတ်တိုနေတာများလားဆိုပြီး နိုဝယ်လို့ နာမည်ပြောင်းခဲ့တာပါ။ နိုဝယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းလေးအပြင် @perditas_journey အမည်နဲ့ အင်စတာဂရမ်အကောင့်လည်း ရှိသေးတဲ့အကြောင်း insider ကနေတဆင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လမ်းခွဲပြီး (၇)လအကြာမှာ ပြန်ဆုံခဲ့ကြတဲ့ Bradley Cooper နဲ့ Irina Shayk